Home समाचार दशैँमा काठमाडौंमा लकडाउन नहुने, लापरवाही गर्नेलाई कोरोनाले कारवाही गर्ने ! (भिडियो)
काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंमा कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिएको अवस्था छ । संक्रमण फैलिन नदिनको लागि सरकारले आवश्यक कडाई गरिरहेको दाबी गरेको छ । सरकारको मापदण्ड अनुसार मास्क प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने काम कतिको भएको छ ? नियमन निकायले के गर्दैछ ? भन्ने प्रश्नमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्पष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले चाड पर्व, जात्रा तथा उत्सव मनाउँदा कोभिड–१९ सम्बन्धी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न आग्रह गरेको छ । यस अघिको लकडाउन, निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी नदेखिएकोले निषेधाज्ञा लकडाउन नगरिने तर संक्रमणबाट बच्न मापदण्ड पालना नगरे कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।
उहाँले प्रशासनको आग्रहलाई नमानेर लापरवाही गर्नेलाई कोरोनाले कारवाही गर्ने पनि बताउनुभयो । चाडपर्वमा भेलाजम्मा तथा भोजभतेर नगर्न, यस वर्षको चाड जो जहाँ छ त्यहीँ बसेर मनाउन तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका निर्धारित मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नरगराउन जिल्ला प्रसासन काठमाडौंले अनुरोध गरेको छ ।
स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरी भीडभाड गरेर ब्यापार ब्यबसाय गर्नेलाई बन्द गर्दिने सम्मको कार्बाही गरिने, मास्क नलगाउनेलाई रु १ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ । तर पछिल्लो अनुगमनमा भने काठमाडौंमा मास्क नलगाउने मान्छे नै नभेटिएको जिल्ला प्रशासन काठमाडाैंले बताएको छ ।
प्रशासनले मठमन्दिर र शक्तिपिठहरु जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउन मुस्किल पर्ने हुँदा मठमन्दिर नजान गएपनि परैबाट ढोग्न आग्रह गरेको छ । साथै दसैंंको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखले जिल्ला छोड्न नपाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछोड्न भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
नजिकिँदै गरेको बडा दसैं, तिहार, छठ, नेपाल सम्बत लगायतका चाडपर्वमा मानिसहरूको आवतजावत बढ्दा कोरोना संक्रमण थप बढ्नसक्ने भन्दै जोखिम नियन्त्रणका लागि समन्वयन निकायका प्रमुखलाई जिल्ला नछोड्न भनिएको हो । साभार News24 Nepal बाट
Previous articleअष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’ त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् त ?
Next articleगोकुल बाँस्कोटामाथिको मुद्दा तामेलीमा राख्ने अख्तियारको तयारी